एक बोतल पानीको १ करोड ४ लाख ! « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
एक बोतल पानीको १ करोड ४ लाख !
काठमाडौं/एक बोतल पानीलाई कतिसम्म पर्ला रु हामिले प्रायः पसलमा किनेर पिउने पानीको मुल्य २० देखि २५ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । तर, संसारमा सबैभन्दा महँगो पानी अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ‘बेवर्ली हिल्स्’मा बन्ने गर्दछ । ‘बेवर्ली हिल्स्’ नामक कम्पनिले एक बोत्तलको पानीको मुल्य एकलाख अमेरिकी डलर (करिव एक करोड चार लाख रुपेयाँ) तोकेको छ, जुन सर्वसाधारण मानिसले किनेर पिउन सक्दैनन् ।
नेपाल तामाङ सांस्कृतिक घेदुङको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलनले छेवाङ तेञ्जिङ लामा अध्यक्ष रहेको नयाँ केन्द्रिय कार्य